မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Forex နေရင်မြန်အောင်ပေးသူ
နိုင်ငံခြားငွေကြေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး၏စနစ်သည်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစျေးကွက်, Forex, FX, ဒါမှမဟုတ်ပဲ 4X အဖြစ်လူသိများသည်။ ဒါကငွေစျေးကွက်ကြီးမားဘဏ်များအားဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်။ Investopedia Says: ငွေကြေးလဲလှယ်စရာဗဟိုဈေးအစား, ရှိပါတယ်, ကုန်သွယ်ရေး over-the-counter ကောက်ယူနေပါတယ်။ အဆိုပါ Forex စျေးကွက်ငွေကြေးလန်ဒန်, နယူးယောက်, တိုကျို, ဇူးရစ်, Frankfurt, ဟောင်ကောင်, စင်္ကာပူ, ပဲရစ်စ်နှင့်ဆစ်ဒနီ၏အဓိကဘဏ္ဍာရေးစင်တာများအကြားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုန်သွယ်ခံရနဲ့အတူပွင့်လင်း 24 နာရီတစ်ရက်, ငါးရက်တစ်ပါတ်ဖြစ်ပါသည် - အရှိဆုံးအချိန်ဇုန် spanning ။
အဘယ်ကြောင့် Forex ကုန်သွယ်မှု?
1 ။ မြင့်မားသောအရည် - ကကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးအရည်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်နေ့လျှင် $ 1.5 ထရီလီယံကျော်။ သငျသညျအနေအထားအရွယ်အစားသို့မဟုတ်တူညီသောအဆင့်ဆင့်မှာအရောင်းအထဲသို့ခုန်လွန်းများစွာသောလူစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။
2 ။ မြင့်မားသောသြဇာ - Forex ကုန်သည်များ 400-to-1 သြဇာအဖြစ်မြင့်မားနှင့်အတူပိုမိုထိရောက်စွာသူတို့ရဲ့မြို့တော်မူတည်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်သင်စနစ်ယုံကြည်ပါတယ်သည်အထိအနိမ့်သြဇာအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူစတင်ရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
3 ။ အဘယ်သူမျှမ Short ကန့်သတ် - သင်စျေးကွက်တက်ဆင်းအတွက်အကျိုးမပေးနိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကတစ်ဦး 100% စက်မှုကုန်သွယ် algorithm ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Market ကမတည်ငြိမ်မှုနှင့်စျေးနှုန်းအရေးယူစနစ်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့နှစ်ခုအချက်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ forr EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ, အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY နှင့် EUR / GBP ကုန်သွယ်သတိပေးချက်ပေးထားပါတယ်။ ForexSignalsProvider.com အနိမ့်စျေးကွက်ထိတွေ့မှုရရှိ, နေ့ကုန်သွယ် mode ကိုတာရှည်ခြင်းနှင့်တိုတောင်းသောရာထူးကြာပါသည်။ အမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်နှင့်ရပ်တန့်အရှုံးအရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။
အများစုမှာ entry ကိုနှင့်ထွက်ပေါက်ကန့်သတ်အမိန့်အဘယျအနိမ်ဆင်းကုန်သွယ်ကုန်ကျစရိတ်ကို အသုံးပြု. ယူနေကြသည်။
brokerage Forex အကောင့်အသစ်များ၏
သငျသညျ3ရွေးချယ်စရာရှိသည်:
1 ။ Mini ကိုအကောင့်: သင် Forex စျေးကွက်အသစ်ဖြစ်ကြပါလျှင်တစ်ဦး mini ကိုအကောင့်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါသြဇာစံအကောင့်ထက်မကြာခဏပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်သင် mini ကိုကန်ထရိုက်ကုန်သွယ်မှု။ သင်ဤအဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ် $ 250 နှင့်အတူအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
2 ။ စံအကောင့်: စံအကောင့်အတွေ့အကြုံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအဘို့ဖြစ်ကြ၏။ သိုက် Mini ကိုအကောင့်ထက်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်သြဇာအနိမ့်သည်။ သင်ဤအကောင့်ထဲမှာအပြည့်အဝစာချုပ်များရောင်းဝယ်ဖောက်။ သင်ဤ $ 2500 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတူအကောင့်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
3 ။ Demo အကောင့်: ကုန်သွယ် Forex မှာသင်၏လက်ကိုကြိုးစားရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ် simulated အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦး simulated / သရုပ်ပြ Forex ကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ, သင်တို့နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုကို virtual ပိုက်ဆံ $ 25,000 သို့မဟုတ် $ 100,000 ရ။ ပလက်ဖောင်းတိုက်ရိုက်ကိုးကားအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်သင့် simulated အရောင်းအတူလေလံ / အစစ်အမှန်ကုန်သည်များပြုပါပျံ့နှံ့မေးဖို့ကိုအသုံးပြုပါ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏နှစ်လ Subscription ($ 100 အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုး) ရရှိမည်မှာအနည်းဆုံး $ 189 depositing AVAFX ပွဲစားနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်လျှင်ကျနော်တို့လုံးဝအခမဲ့ယခုအခါမြှင့်တင်ရေးရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးတော့, မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာနှိပ်ပါကျနော်တို့ 24 နာရီအတွင်းသင့်အကောင့်ကိုသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။
ပွဲစားများ Forex ကုန်သွယ်မကော်မရှင်များအားသွင်း။ သငျသညျထိုလေလံမှာမေးပါနှင့်ရောင်းချမှာကိုဝယ်သည့်အခါပွဲစားများ, ပြန့်ပွားနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဖြတ်ပါစေ။ ပြန့်ပွားသည့် pair တစုံနှင့်ပွဲစားပေါ် မူတည်. pips2မှ6ထံမှများသောအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အတူအကောင့်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ပွဲစားဆုံးဖြတ်ခြင်းအခါအရေးပါသောအရာပါပဲ။ အဆိုပါသြဇာ 200 သကဲ့သို့မြင့်မားဖြစ်နိုင်သည် 1 တစ်ကုန်သည်ငွေကြေး၏ $ 0.5 ထိန်းချုပ်ဖို့အနားသတ်သာ $ 100 ချထားရန်လိုအပ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်။ သြဇာနှစ်ဆအစွန်းဓားကိုဖြစ်ဒါကြောင့်သတိနဲ့အသုံးပွုနိုငျသတိရပါ။
စနစ်တစ်ခုစနစ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ဘယ်လောက်ကောင်းဒါမှမဟုတ်စေသည်ငွေဘယ်လောက်, ကြည့်ဘယ်လောက်ကောင်းနေပါစေ။ "အန္တရာယ် Capital ကို" သို့မဟုတ် "အန္တရာယ်ရန်ပုံငွေများ" သာကုန်သွယ်ရာတွင်အသုံးပြုရပါမည်။ "အန္တရာယ် Capital ကို" သို့မဟုတ် "အန္တရာယ်ရန်ပုံငွေများ" (ရန်ပုံငွေများသူတို့ဆုံးရှုံးဖို့တတ်နိုင်) ကဈေးကွက်ထဲမှာကုန်သွယ်မှုမပြုလုပ်သင့်ရှိသည်ပါဘူးသူတစ်ဦး။
System ကို object
ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပုဂ္ဂလဒိဋ္စံလည်းမရှိ, နေ့တိုင်းအချက်ပြမှုများကို generate မှတူညီသောစံတွေနဲ့ parameters သုံးပါ။
ဟုတ်ကဲ့, က 100% စက်မှုဖြစ်၏ သင်သည်သူတို့၏ Stop ပျောက်ဆုံးခြင်း, အမြတ်ပစ်မှတ်ဘယ်နေရာမှာ / တဲ့အခါမှာအရောင်းအမှထွက်ရန်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဆုံးဖြတ်ချက်များအကဲဖြတ်သို့မဟုတ်ယူရန်မလိုအပ်နှင့်အတူကြိုတင်ငွေ၌သင်တို့၏အမှာစာများပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖော်ပြထားခြင်းအဖြစ်ထွက်ပေါက်မှ entry ကိုကနေအပြည့်အဝလမ်းညွှန်မှုနဲ့ပြည့်စုံသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
ForexSignalsProvider.com ကုန်သွယ်အဆင့်ဆင့်ကိုချက်ချင်း 8 ပြီးနောက် web site ကိုအပေါ်ထားရှိနေကြသည်: 00 နံနက် EDT ။
* EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
* အမေရိကန်ဒေါ်လာ / JPY
System ကိုယခင်ကုန်သွယ်ရေးရလဒ်ကိုလျစ်လျူရှုလိုက်ခြင်း, နေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတစ်ခုချင်းစီကို pair တစုံနှစ်ခုရာထူး (တဦးတည်းရှည်လျားတဦးတည်းအတို entry ကို) ၏အများဆုံးကုန်သွယ်မှုပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်အချို့သောအဘို့ဒါမှမဟုတ်သုံးအားလုံးအတွက်၏မတဦးတည်းအဘို့အဘယ်သူမျှမအရောင်းနှင့်အတူရက်ပေါင်းနိုင်ပါသည်။
5 ညနေ EDT: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ပေါက်အဆင့်ဆင့်မဆိုတစ်နေ့တာအတွင်းထိမပါလျှင်, ငါတို့သည် 00 မှာမဆိုပွင့်လင်းအနေအထား exit ပါလိမ့်မယ်။ 8 မှ 00am EDT: 10 နံနက် EDT ForexSignalsProvider.com များအတွက် entry သတိပေးချက် 00 ကတည်းကနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအကောင်းရှိပါတယ်။ တစ်ဦး entry ကို signal ကိုသတိပေးခံခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့က cancel လိမ့်မယ်ကျနော်တို့ရဲ့ကုန်သွယ်နာရီအတွင်းဖြည်မနှင့်ကျွန်တော်နက်ဖြန်နေ့၌အသစ်တစ်ခုကုန်သွယ် signal ကိုစောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ ForexSignalsProvider.com ရပ်တန့်ဈေးကွက်အမိန့်ကိုဝယ်ခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ထားသောကုန်သွယ်အဆင့်ဆင့်အဘို့ရေတိုရပ်တန့်ဈေးကွက်အမိန့်ရောင်းပေးပို့သည်။ System ကိုစျေးကွက်ကုန်သွယ်မှုရာဘက်ဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
သငျသညျသစ်ကိုအချက်ပြမှုများစစ်ဆေးသည်နှင့်အမိန့်ကိုပေးပို့ဖို့နံနက်ယံ၌တစ်နေ့လျှင်5မိနစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ intraday စျေးကွက်စောင့်ကြည့်ဖို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။
သင်ကအချက်ပြမှုများကိုမှချက်ချင်းလက်လှမ်းရှိသည်။ Plimus သင်၏ဝယ်ယူမှု MIC မှခွင့်ပြုပြီးနောက်အလိုအလျောက်အထောက်အထားများ rlogin သင်ရရှိပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏ Paypal အကောင့်အတွက်အချိန်မရွေးသင့်စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။